Venus akatevedzana ari kaviri-kutendeuka mukuru maitikiro paIndaneti Ups ane goho simba chinhu 0,8. Akanyorerwa kuti kushanda mune murombo simba munzvimbo. Ivo rinopa yakakwirira nesimba arambe achirema pamwe refu negadziriro yeparutivi nguva duku. Zviri yakanaka ATMs, rwezvemabhengi nezvimwe mabhizimisi akaoma mafomu. Users anogona kuchinja kuchaja kuitika kubva 1a kuti 6a maererano akasiyana applications.Venus Series vane USB uye RS-232 Kukurukura zvengarava sezvo mureza, aine pakuvara akangwara slots okuwedzera adapters, dzakati converters uye rondedzera kuonana nemakadhi.
1.True miviri-kutendeuka paIndaneti kupota
A kutendeuka kwechokwadi kaviri Ups ichapa akachena mukuru yakati yepamusoro simba kudzivirira zvakazara basa-dzinonetsa mano akadai nehanya network, kombiyuta duku nzvimbo, servers, Telecom zvikumbiro, uyewo maindasitiri mafomu,.
2. Output simba chinhu 0,8
Kufananidzwa paIndaneti ups pamusika ano, Venus yaitevedzana Ups anopa nani goho simba chakaita kusvika 0,8. Rinopa yepamusoro kuita uye effciency kuti kutsoropodza mafomu.
3. Wide chiyamuro voltage Range (110V-300V)
Venus dzinogona achiri kupa kugadzikana simba kwakabatana mano pasi kusagadzikana simba runyararo.
Lock goho kakawanda panguva 50Hz kana 60Hz huenderane simba vasanonoka equipments.
5. ECO muoti kushanda nesimba kuponesa
Anopa kunyatsoshanda yakakwirira sezvinoita 97% kudimbura simba kushandiswa & mutengo. Ups simba Chikumbiro Via kunofambira mberi yokunzvenga, nenguva achidzokera paIndaneti kaviri kutendeuka kana zvava kudikanwa.
6.Emergency Power Off (EPO) Rinoshanda
Nyaya iyi inogona kuwana vashandi uye midziyo kana moto kana zvimwe akaipisisa.
7. DSP michina rinoshandisirwa nokuda 6-10K yokutevedzera
A DSP controller chinopa hwakavandudzwa mutengo-inobudirira mhinduro dzakakwirira unongotaura.
• Ups zvinogona kwakabatana kuti kombiyuta Via USB kana RS232 inowanikwa. Saka unogona kuziva Lan vachiongorora kuroora kana dzakawanda anoita Ups, naicho anogona kuongorora dzimwe kupota izvo chokuita kombiyuta Via Lan.
• Ups zvichiongororwa Software ane zvinopfuura 10 mhando mutauro yakasarurwa.
• Humanized mashandiro inowanikwa, ndiro simba uye anogona rinoratidza bhatiri voltage, kakawanda, mutoro, tembiricha uye mamwe mashoko nenzira-zvechokwadi nguva vachiongorora kuburikidza charts.
• Alarm dzakasiyana simba chiitiko chaigona wakasiyiwa redhiyo, mbozha mameseji, e-mail uye SNMP etc.
zera, DXWXH (mm)
Net Weight (Gen.)
Low Line Kutamisirwa
110 VAC ± 3% pa ​​50% Load; 176 VAC ± 3% pa ​​100% Load
Low Line kwakatangazve
High Line Kutamisirwa
High Line kwakatangazve
High Line Loss Voltage - 10V
Single danho pamwe ivhu
≧ 0.99 pa 100% Load
50 Hz ± 0.1 Hz kana 60Hz ± 0.1 Hz
Current Okura Ratio
≦ 3% @ 100% Linear Load; ≦ 6% @ 100% Non-Linear Load
AC Mode kuna Batt. rudzi
9 maawa kupora 90% vanokwanisa
Default: 4 A ± 10%; Max .: 6a ± 10%
Default: 1 A ± 10%; Max .: 2Vanhu ± 10%
0 ~ 40 ° C (bhatiri upenyu kutenderera vachapiwa kupfupisa kana tembiricha rinopfuura 25 ° C)
<95% uye asiri condensing
Acoustic fuertes Level
<55dB @ 1 Meter
<58dB @ 1 Meter
Smart RS-232 kana USB
Power kutarisirwa kubva SNMP maneja uye dandemutande Browser
Previous: 10-30KVA High Frequency Online Ups (3: 3) Next:1-3KVA High Frequency Ups (1: 1)
1-3KVA High Frequency Ups With Built-mu Battery ...